China Umatshini wokuHlola wokuKhanya oZenzekelayo weLVP (ibhotile yePP) abavelisi kunye nabathengisi | IVEN
Umatshini wokuHlola ukuKhanya ngokuzenzekelayo
Umatshini wokuhlola ozenzekelayo unokusetyenziswa kwiimveliso ezahlukeneyo zamayeza, kubandakanya inaliti yomgubo, inaliti yomgubo wokumisa okomileyo, inaliti yevolumu encinci / inaliti ye-ampoule, iglasi yeglasi enkulu / ibhotile yeplastikhi ye-IV.
Umatshini wokuhlola ukukhanya kwe-LVP ngokuzenzekelayo Intshayelelo:
Isikhululo sovavanyo sinokuqwalaselwa ngokweemfuno zabathengi, kwaye ukuhlolwa okujolisiweyo kunokuqwalaselwa kwimizimba eyahlukeneyo yangaphandle kwisisombululo, inqanaba lokugcwalisa, ukubonakala nokutywina njl.
Ngexesha lokuhlolwa kolwelo lwangaphakathi, imveliso evavanyiweyo ibrake ime ngxi ngexesha lokujikeleza ngesantya esiphezulu, kwaye ikhamera yezamashishini ngokuqhubekayo ithatha imifanekiso ukufumana imifanekiso emininzi, eqhutywa yi-visual algorithm yokuzimela ngokuzimeleyo ukuze igwebe ukuba imveliso ehloliweyo iyafaneleka .
Ukwala ngokuzenzekelayo iimveliso ezingafanelekanga. Yonke inkqubo yokufumanisa inokulandelwa, kwaye idatha igcinwa ngokuzenzekelayo.
Umgangatho ophezulu wokuhlola umatshini ozenzekelayo unokunceda abathengi ukuba banciphise iindleko zabasebenzi, ukunciphisa isantya sempazamo yokuhlolwa kwesibane kunye nokuqinisekisa ukhuseleko kumayeza abaguli.
Umatshini wokuhlola ukukhanya kwe-LVP ngokuzenzekelayo:
1.Gcwalisa ngokuzenzekelayo ulwahlulo olulinganayo kwiibhotile, kwaye uziphelise ngokuzenzekelayo iimveliso ezinesiphene ngokweziphumo zovavanyo.
2.Ingazenzekelayo ijikeleze ibhotile ukuba ihlolwe ngesantya esiphezulu, efanelekileyo ekuhambeni kokungcola okungamanzi kwaye iququzelele ukuhlolwa.
Umgaqo wokucinga obonakalayo usetyenziselwa ukubhaqa kwaye uchanekile ngakumbi ukugweba imicimbi yangaphandle ebonakalayo.
Umsebenzi we-4.PLC HMI, indawo yolawulo lwe-LCD yolawulo.
5.It uyakwazi ukubona iziphene amakhonkco, iibhotile ezantsi amabala amnyama kunye iminqwazi ibhotile.
Uyilo lwesakhiwo esinamanzi 6.Imanzi yamkelwe ngokuyinxalenye, ekulungele ukucoca ibhotile eyaphukileyo. Indawo yebhotile eyaphukileyo inokuhlanjwa ngokuthe ngqo ngamanzi.
I-LVP izibonelelo zokuhlola umatshini wokukhanya ngokuzenzekelayo:
1.Adopt inkqubo servo drive ngokupheleleyo ukuqonda-high speed, ukusebenza ezinzileyo kwaye ichanekile kwaye uphucule umgangatho ukufunyanwa umfanekiso.
Ukulawulwa okuzenzekelayo kwe-servo kulungelelanisa ukuphakama kwesitya esijikelezayo ukulungiselela ukutshintshwa kweebhotile ezahlukeneyo zemigaqo eyahlukeneyo, kunye nokutshintshwa kwamacandelo enkcazo kuluncedo. 8
3.It uyakwazi ukubona iziphene amakhonkco, iibhotile ezantsi amabala amnyama kunye iminqwazi ibhotile.
Isoftware inomsebenzi ogcweleyo wedatha, ilawula ifomula yovavanyo, igcina (inokuprinta) iziphumo zovavanyo, yenza uvavanyo lweKNAPP, kwaye iyayiqonda intsebenzo yomatshini womatshini womntu.
I-5 isoftware inomsebenzi wokuhlalutya ngaphandle kweintanethi, onokuthi uvelise inkqubo yokufumanisa kunye nohlalutyo.
I-LVP umatshini wokuhlola ukukhanya ngokuzenzekelayo
Ibhotile yeplastiki eyi-50-1,000ml / ibhotile ye-PP ethambileyo
Ifayibha, iinwele, iibhloko ezimhlophe kunye nezinye izinto ezingenakunyibilika, amaqamza, amabala amnyama kunye nezinye iziphene ezibonakalayo
Ukusetyenziswa komoya oxineneyo
Umthamo wemveliso enkulu
I-18,000pcs / h
Inkqubo yokusebenza yokukhanya komatshini we-LVP ngokuzenzekelayo:
Egqithileyo Ibhotile yeglasi eyi-30ml yokuGcwalisa isiraphu kunye noMatshini wokuPakisha woNyango
Okulandelayo: Ukuqokelelwa kwegazi ngenaliti yomatshini
Umatshini we-Ampoule À uCoudre Singer, Isirinji elahlwayo kunye neNaliti yokuvelisa umgca, Umatshini ozalisiweyo-weSirinji, Umatshini wokugcwalisa weSirinji ozalisiweyo, Umatshini weAmpoule À iCoudre Led, Umatshini weAmpoule À uCoudre Bernina,